Galaxy S10+ | Samsung Support Myanmar
ယခု ဆိုက် တွင် Cookie ကိုအသုံးပြုထားပါသဖြင့် Cookie အသုံးပြုမှုကို လက်ခံပါက လက်ခံပါသည် ဆိုသောခလုတ်ကို ကလစ်နှိပ်ကာ ဆက်လက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်
တည်နေရာဒေသ သို့မဟုတ် ဘာသာစကားကို ရြေးခ်ယ္ပါ။
1 Depth Menu ကို ပြန်သွားရန်
၇၀ လက်မနဲ့ အထက် တီဗွီများ
၆၀-၆၉ လက်မ တီဗီများ
၅၀ - ၅၉လက်မ တီဗီများ
၄၀ - ၄၉ လက်မ တီဗီများ
၃၀-၃၉ လက်မ တီဗီများ
ဘယ် TV အရွယ်အစားကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူသင့်ပါသလဲ။
ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ QLED 8K
အစွမ်းထက်ပြီး ပြီးပြည့်စုံစွာ သန့်ရှင်းဖို့ Samsung Jet™
သတင်းများ နှင့် သတိ​ပေးချက်များ
Live Chat ပြောဆိုခြင်း
Popup အလွှာများ ပိတ်ရန်
တောင်းပန်ပါတယ်။ သင့်၏လှည်းတွင် နေရာလွတ်မရှိတော့ပါ။
ဤထုတ်ကုန်မရှိလျှင် အသုံးပြုထားသော အထူးလျှော့စျေးကို မရွေးချယ်နိုင်ပါ။
ထုတ်ကုန်ကို ပယ်ဖျက်ရန် သေချာပါသလား?
wish list စာရင်းသို့ ရွေ့ရန်
Samsung.com သို့သွားရန် ဤအကွက်ကို အမှန်ခြစ်ပါ။
Samsung Service Updates ကိုလက်ခံပါတယ်။
SAMSUNG.COM သို့ ဆက်သွားရန်
ထုတ်ကုန် ဦးစားပေးမှုကို အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် သင့်အတွက် အကြံပြုချက်များ ပေးနိုင်အောင် ကူညီပါ။
သတိပေးချက် သတင်း အချက်အလက်နှင့် သတိပေးချက်များ : 3
Galaxy ဖုန်း​တွေမှာ Password ​မေ့သွားပါတယ်ဘယ်လိုပြန်ဖွင့်ရမလဲ
Find My Mobile ကို အသုံးပြုနည်း
သင့်ဧ။် Galaxy ဖုန်းတွင် Fast Charging ဖြင့်အားသွင်းခြင်း
SmartThings App တွင် ပါရှိသည့် Settings များအကြောင်း
လက်စွဲစာအုပ် & ဒေါင်းလုတ်များ
Galaxy Buds အသုံးပြုနည်း
MirrorLink ဝန်ဆောင်မှု အထောက်အပံ့
S Voice ဝန်ဆောင်မှု ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေညာချက်
စစ်ထုတ်မည် စစ်ထုတ်မည် ပြန်လည်စတင်ပါ
ပိုမိုသက်ဆိုင်သည် အသစ်ဆုံး ကြည့်ရှုမှုအများဆုံး
အရံ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္း
စက္တင္ သင်၏ Galaxy S22 စက်၏ တုန်ခါမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်နည်း
မိုဘိုင်းကိရိယာများအတွက် အမေးများသော မေးခွန်းများ။ သင်၏ Galaxy S22 တွင် တုန်ခါမှုကို တိုးတက်အောင်လုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ Samsung Support ဖြင့် ပိုမိုရှာဖွေပါ။
သံုးစြဲပံု Galaxy S22 AI ကင်မရာကို အသုံးပြုပြီး
မိုဘိုင်းကိရိယာများအတွက် အမေးများသော မေးခွန်းများ။ Galaxy S22 AI ကင်မရာကို အသုံးပြုပြီး Single Take လုပ်ဆောင်ချက် အကောင်းဆုံးအသုံးချနည်းအား Samsung Support ဖြင့် ပိုမိုရှာဖွေကြည့်ရှုရန်။
သံုးစြဲပံု AR အီမိုဂျီ စတစ်ကာ အသုံးပြုနည်း
မိုဘိုင်း စက်ကရိယာများအတွက် မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ။ Samsung ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် AR အီမိုဂျီ စတစ်ကာ အသုံးပြုနည်းအကြောင်း နောက်ထပ် ရှာဖွေပါ။
သံုးစြဲပံု S22 Ultra S Pen ကို အသုံးပြုနည်းနှင့် ၎င်း၏ လိုက်ဖက်ညီမှုကို စစ်ဆေးပါ။
မိုဘိုင်း စက်ကရိယာများအတွက် မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ။ S22 S Pen အသုံးပြုနည်းအကြောင်း နောက်ထပ် ရှာဖွေပြီး Samsung ပံ့ပိုးမှုနှင့် ၎င်း၏ လိုက်ဖက်ညီမှုကို စစ်ဆေးပါ။
သံုးစြဲပံု စခရင်ထိပ်ဆုံးရှိ အစိမ်းရောင်အစက်၏ အဓိပ္ပာယ်ကို သိပါ
မိုဘိုင်း စက်ကရိယာများအတွက် မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ။ စခရင်ထိပ်ဆုံးရှိ အစိမ်းရောင်အစက်က ဘာလဲဆိုသည်ကို Samsung Supportဖြင့် ပိုမိုသိရှိရန်။
သံုးစြဲပံု Samsung နာရီရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဘာလဲ။
မိုဘိုင်းကိရိယာများအတွက် အမေးများသော မေးခွန်းများ။ Samsung နာရီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဘာလဲ ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ Samsung Support တွင် ပိုမိုရှာဖွေရန်။
သံုးစြဲပံု တပ်ချ် စခရင် ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်လျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ
မိုဘိုင်း စက်ကရိယာများအတွက် မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ။ တပ်ချ် စခရင် ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်လျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုသည်ကို Samsung Support ဖြင့် ပိုမိုရှာဖွေပါ။
မိုဘိုင်းကရိယာများအတွက် မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ။ မိုက်ကရိုဖုန်း သို့မဟုတ် စပီကာက ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်လျှင် မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမလဲ ဆိုသည်ကို Samsung Supportဖြင့် ပိုမိုရှာဖွေပါ။
သံုးစြဲပံု Samsung Galaxy S22 စီးရီးများ၏ ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကိုကြည့်ပါ။
Samsung မိုဘိုင်းအတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် Samsung Galaxy S22 စီးရီးများ၏ ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကို ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု Samsung Galaxy S22 စီးရီးများ၏ အလွန်ကောင်းမွန်သည့်အဆင့်အတန်းမြင့် စမတ်ဖုန်းအတွေ့အကြုံကိုခံစားလိုက်ပါ။
Samsung မိုဘိုင်းအတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် Samsung Galaxy S22 စီးရီးများ၏ အလွန်ကောင်းမွန်သည့်အဆင့်အတန်းမြင့် စမတ်ဖုန်းအတွေ့အကြုံကိုခံစားလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု Samsung Galaxy S22 စီးရီးများကို ကြိုးသို့မဟုတ် ကြိုးမဲ့ဖြင့် ဘယ်လိုအမြန်အားသွင်းမလဲ
Samsung မိုဘိုင်းအတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် Samsung Galaxy S22 စီးရီးများကို ကြိုးသို့မဟုတ် ကြိုးမဲ့ဖြင့် ဘယ်လိုအမြန်အားသွင်းမလဲ နှင့် ကြိုးမဲ့ပါဝါမျှဝေခြင်းကို အသုံးပြုနည်းအကြောင်း
သံုးစြဲပံု Samsung Galaxy S22 စီးရီးများတွင် nano-SIM ကဒ်နှင့် eSIM ထည့်သွင်းနည်း။
Samsung မိုဘိုင်းအတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် Samsung Galaxy S22 စီးရီးများတွင် nano-SIM ကဒ်၊ eSIM ထည့်သွင်းနည်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်နည်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု Samsung Galaxy S22 စီးရီးများကို သော့ဖွင့်ရန်အတွက် လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုမှုကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်အသုံးပြုမလဲ။
Samsung Support ဖြင့် Samsung Galaxy S22 စီးရီးများကို သော့ဖွင့်ရန်အတွက် လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုမှုကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်အသုံးပြုမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု Samsung Galaxy S22 Ultra ဖြင့် S Pen အသုံးပြုနည်းနှင့် ကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း
Samsung မိုဘိုင်းအတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် Samsung Galaxy S22 Ultra တွင် S Pen အသုံးပြုနည်းနှင့် ကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု Samsung Galaxy S22 စီးရီးများမှ ပိုတောက်ပချောမွေ့သည့် အဆင့်မြင့် စခရင်နှင့် တွေ့ဆုံလိုက်ပါ။
Samsung မိုဘိုင်းအတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် SamsungGalaxy S22 စီးရီးများမှ ပိုတောက်ပချောမွေ့သည့် အဆင့်မြင့် စခရင်နှင့် တွေ့ဆုံနည်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု Samsung One UI 4.1 ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုအသစ်တွေက ဘာတွေလဲ
Samsung မိုဘိုင်းအတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် One UI 4.1 ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုအသစ်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် ဆယ်လူလာဒေတာများ မရနိုင်သည့်အချိန်တွင် SIM ကဒ်ကို စစ်ဆေးပါ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် ဆယ်လူလာဒေတာများ မရနိုင်သည့်အချိန်တွင် SIM ကဒ်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဆိုတာ ပိုမိုရှာဖွေလိုက်ပါ။
ပါ၀ါ အသေးစားတုန်ခါမှုများမှ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် အသေးစားတုန်ခါမှုများမှ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
စက္တင္ ဖုန်းထဲမှ မိမိ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များအားလုံးကို ဘယ်လိုဖျက်ပစ်ရမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် ဖုန်းထဲမှ မိမိ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များအားလုံးကို ဘယ်လိုဖျက်ပစ်ရမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု သင့် Galaxy ဖုန်းကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် သင့် Galaxy ဖုန်းကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု ဖုန်းမော်ဒယ်နံပါတ် ၊ ထုတ်ကုန်နှင့် IMEI နံပါတ်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့်ဖုန်းမော်ဒယ်နံပါတ် ၊ ထုတ်ကုန်နှင့် IMEI နံပါတ်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာ ပိုမိုရှာဖွေလိုက်ပါ။
ဘလူးတုသ္ သင့်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်တွင် Bluetooth ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် သင့် Galaxy ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်တွင် Bluetooth ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု သင့် Galaxy ဖုန်းအပူလွန်ကဲခြင်းမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် သင့် Galaxy ဖုန်းအပူလွန်ကဲခြင်းမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု သင့် Galaxy ဖုန်းကို မဲလ်ဝဲ မှဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ သင့် Galaxy ဖုန်းကို မဲလ်ဝဲ မှဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာ Samsung Support ဖြင့် ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု ရပ်သွားသည့် Galaxy ဖုန်းကို ဘယ်လိုပြန်စမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် ရပ်သွားသည့် Galaxy ဖုန်းကို ဘယ်လိုပြန်စမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု Android ဖုန်းတွင် ခေါ်ဆိုမှုဆက်တင်များကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် Android ဖုန်းတွင် ခေါ်ဆိုမှုဆက်တင်များကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
အရံ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္း Galaxy ဖုန်းတွင် Smart Switch ကိုအသုံးပြု၍ ဒေတာများကို ဘယ်လိုလွှဲပြောင်းသိမ်းဆည်းမလဲ
Samsung မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် Galaxy ဖုန်းတွင် Smart Switch ကိုအသုံးပြု၍ ဒေတာများကို ဘယ်လိုလွှဲပြောင်းသိမ်းဆည်းမလဲ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
နက္ဒ္ေ၀ါ့ႏွင့္ Wifi Wi-Fi ကွန်ရက်သို့မချိတ်ဆက်သည့် Galaxy ဖုန်းကို ဘယ်လိုပြဿနာရှာဖွေမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် Wi-Fi ကွန်ရက်သို့မချိတ်ဆက်သည့် Galaxy ဖုန်းကို ဘယ်လိုပြဿနာရှာဖွေမလဲဆိုတာ ပိုမိုရှာဖွေလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု ကင်မရာအက်ပ်အမှားကို ဘယ်လိုပြဿနာရှာဖွေမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် ကင်မရာအက်ပ် ပြဿနာများကို ဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
နက္ဒ္ေ၀ါ့ႏွင့္ Wifi မိုဘိုင်းဒေတာပြဿနာများ အဖြေရှာနည်း။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် မိုဘိုင်းဒေတာပြဿနာများ အဖြေရှာနည်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
အသံ ဖုန်းခေါ်ဆိုနေစဉ် အသံအရည်အသွေးနိမ့်ကျမှုကို ဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုနေစဉ် အသံအရည်အသွေးနိမ့်ကျမှုကို ဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု ဆော့ဖ်ဝဲအပ်ဒိတ်ပြဿနာများကို ဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲ
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲအပ်ဒိတ်ပြဿနာများကို ဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု အသံကိုကောင်းစွာအသိအမှတ်မပြုတော့သည့်အခါ သင့် Galaxy ဖုန်းရဲ့ မိုက်ကရိုဖုန်းကို ဘယ်လိုပြဿနာရှာဖွေမလဲ
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် အသံကိုကောင်းစွာအသိအမှတ်မပြုတော့သည့်အခါ သင့် Galaxy ဖုန်းရဲ့ မိုက်ကရိုဖုန်းကို ဘယ်လိုပြဿနာရှာဖွေမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
ဘလူးတုသ္ Bluetooth နားကြပ်အသံမငြိမ်ပါက ဘယ်လိုပြဿနာအဖြေရှာမလဲ
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် Bluetooth နားကြပ်အသံမငြိမ်ပါက ဘယ်လိုပြဿနာအဖြေရှာမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
အရံ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္း သင့်ဖုန်းမှ SD ကဒ်ကို မတွေ့ပါက ဘယ်လိုပြဿနာအဖြေရှာမလဲ
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ သင့်ဖုန်းမှ SD ကဒ်ကို မတွေ့ပါက ဘယ်လိုပြဿနာအဖြေရှာမလဲဆိုတာကို Samsung Support ဖြင့်ပိုမိုရှာဖွေလိုက်ပါ။
Galaxy Apps သင့် Galaxy ဖုန်းတွင် Samsung Members ကိုအသုံးပြု၍ ဘယ်လိုပြဿနာရှာဖွေမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် သင့် Galaxy ဖုန်းတွင် Samsung Members ကိုအသုံးပြု၍ ဘယ်လိုပြဿနာရှာဖွေမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ ရေထဲဖုန်းကျသွားပါက ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို Samsung Support ဖြင့် ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းပြဿနာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
စက္တင္ ကျွန်ုပ်ဖုန်းတွင် ရေစက်ပုံပြနေပြီး အားမဝင်ပါ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် ဖုန်းတွင် ရေစက်ပုံပြနေပြီး အားမဝင်ခြင်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု ဖုန်းကွဲပြီး ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် အက်ကွဲရာရှိနေခြင်း
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ ဖုန်းကွဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အက်ကွဲရာရှိနေပါက ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို Samsung Support ဖြင့် ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
ဘက္ထရီ Galaxy ဖုန်းအားသွင်းရာတွင်ကြာနေပါသည်။ ဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Galaxy ဖုန်းအားသွင်းရာတွင်ကြာနေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ Samsung Support ဖြင့် ဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲ။
သံုးစြဲပံု မိမိ Samsung စမတ်ဖုန်းသည် လက်ဗွေကိုအသိအမှတ်မပြုဖြစ်နေသည်။ ဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ မိမိ Samsung စမတ်ဖုန်းသည် လက်ဗွေကိုအသိအမှတ်မပြုဖြစ်နေခြင်းအကြောင်း ပိုမိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ Samsung Support ဖြင့် ဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမလဲ
SNS ပုံများကို Instagram သို့မျှဝေသည့်အခါ ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကျဆင်းနေခြင်း
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် ပုံများကို Instagram သို့မျှဝေသည့်အခါ ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကျဆင်းနေခြင်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု ONE UI 4.0 နှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ ONE UI 4.0 နှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများအကြောင်း Samsung Support ဖြင့် ပိုမိုရှာဖွေလိုက်ပါ။
စက္တင္ Galaxy ဖုန်းသို့မဟုတ် တက်ဘလက်မှ အကောင့်များဖယ်ရှားခြင်း
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Galaxy ဖုန်းသို့မဟုတ် တက်ဘလက်မှ Samsung Support ဖြင့် အကောင့်ဖယ်ရှားနည်းကိုပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု Galaxy ဖုန်းအား နှေးခြင်းရပ်သွားခြင်းတို့မဖြစ်စေရန် ဖုန်းကိုပုံမှန် restart ချပေးပါ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် Galaxy ဖုန်းအား နှေးခြင်းရပ်သွားခြင်းတို့မဖြစ်စေရန် ဖုန်းကိုပုံမှန် restart ချနည်းကို ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
Galaxy Apps ဖန်သားပြင်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ခြင်း။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် ဖန်သားပြင်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါက ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု ဖုန်း၏ GPS တည်နေရာသည် မမှန်ကန်ပါ။ ဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ ဖုန်း၏ GPS တည်နေရာမမှန်ကန်မှုအကြာင်း ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။ Samsung Support ဖြင့် ဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမလဲ
စက္တင္ အာရုံခံဆင်ဆာ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ခြင်း
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့်အာရုံခံဆင်ဆာ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ခြင်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု စခရင်နှင့် ဖုန်း၏ဘောင်ကြားတွင် ကွာဟနေပါသည်။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် စခရင်နှင့် ဖုန်း၏ဘောင်ကြားတွင် ကွာဟနေခြင်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု Smart View သုံးနေစဉ် ပြဿနာရှာဖွေခြင်း
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် Smart View သုံးနေစဉ် ပြဿနာရှာဖွေခြင်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုက်ပါ။
စက္တင္ အသုံးဝင်သည့် Separate app sound အပါအဝင် Galaxy ဖုန်းတွင်ပါသည့် အသံဆက်တင်များ
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် အသုံးဝင်သည့် Separate app sound အပါအဝင် Galaxy ဖုန်းတွင်ပါသည့် အသံဆက်တင်များအကြောင်း ပိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု ONE UI 4.0 တွင် ဘယ်လိုအသစ်တွေပါသလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ ONE UI 4.0 တွင် ဘယ်လိုအသစ်တွေပါသလဲဆိုတာ Samsung Support ဖြင့် ပိုမိုသိရှိလိုက်ပါ။
ဘက္ထရီ ဖုန်းအသစ်တွင် ဘက်ထရီကုန်မြန်နေသလိုဖြစ်ပါက ဘာလုပ်ရမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် ဖုန်းအသစ်တွင် ဘက်ထရီကုန်မြန်နေသလိုဖြစ်ပါက ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု ဖုန်းခေါ်ဆိုရာတွင် အသံကောင်းကောင်းမကြားရတော့ပါက ဘာလုပ်ရမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုရာတွင် အသံကောင်းကောင်းမကြားရတော့ပါက ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
နက္ဒ္ေ၀ါ့ႏွင့္ Wifi သင့် Galaxy ဖုန်းတွင် ခေါ်ဆိုမှုပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွန်ရက်အချက်ပြမှုမရရှိတော့ပါက ဘာလုပ်ရမလဲ
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Sypport ဖြင့် သင့် Galaxy ဖုန်းတွင် ခေါ်ဆိုမှုပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွန်ရက်အချက်ပြမှုမရရှိတော့ပါက ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
ဘက္ထရီ မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် ဖုန်းအားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ခဏခဏစက်ကျခြင်းပြဿနာများဖြစ်လာရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် ဖုန်းအားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် boot loop ပြဿနာများဖြစ်လာရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ပိုမိုရှာဖွေလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု သင့် Galaxy ဖုန်းမှ ခလုတ်များအလုပ်မလုပ်တော့ပါက ဘာလုပ်ရမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ သင့် Galaxy ဖုန်းမှ ခလုတ်များအလုပ်မလုပ်တော့ပါက ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ Samsung Support ဖြင့် ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
အသံ ကြိုးနားကြပ်တွင် အသံမလာပါကဘာလုပ်ရမလဲ
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် ကြိုးနားကြပ်တွင် အသံမလာပါကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
ေခၚဆိုမႈႏွင့္ အဆက္သြယ္မ်ား သင့် Galaxy ဖုန်း ခေါ်ဆို/လက်ခံ မရဖြစ်ပါက ဘာလုပ်ရမလဲ။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် သင့် Galaxy ဖုန်း ခေါ်ဆို/လက်ခံ မရဖြစ်ပါက ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု ဖုန်းဘာကြောင့်နှေးလာသလဲနှင့် ဘယ်လိုမြန်အောင်လုပ်မလဲ
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် ဖုန်းဘာကြောင့်နှေးလာသလဲနှင့် ဘယ်လိုမြန်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာ ပိုမိုရှာဖွေလိုက်ပါ။
သံုးစြဲပံု LED ကာဗာတပ်ထားပါက ဖုန်း၏ NFC အလုပ်လုပ်ပါသလား။
Samsung မိုဘိုင်းလ်အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ။ Samsung Support ဖြင့် LED ကာဗာတပ်ထားပါက ဖုန်း၏ NFC အလုပ်လုပ်ပါသလားဆိုတာ ပိုမိုရှာဖွေလိုက်ပါ။
Galaxy Apps မိမိေပ်ာက္သြားေသာ ဖုန္းကို ရွာေဖြျခင္း
How To Video for Samsung Mobile. Find more about 'How do I locate my device using Find My Mobile?' with Samsung Support.
ေသာ့ခတ္ျခင္း Find my mobile အသံုးျပဳနည္း
How To Video for Samsung Mobile. Find more about 'How do I set up Find My Mobile on my device?' with Samsung Support.
ေသာ့ခတ္ျခင္း Galaxy ဖုန်း​တွေမှာ Password ​မေ့သွားပါတယ်ဘယ်လိုပြန်ဖွင့်ရမလဲ
Galaxy Apps Find my mobile ျဖင့္ မိမိဖုန္းတည္ေနရာျပျခင္း
How to Guide for Samsung Mobile Device. Find more about 'Locating your phone with Find My Mobile' with Samsung Support.
Galaxy Apps Find my mobile ျဖင့္ မိမိဖုန္းကို ဘယ္လို lock လုပ္မလဲ
How to Guide for Samsung Mobile Device. Find more about 'How to lock your phone with Find My Mobile' with Samsung Support.
ကင္မရာ သင္၏ Galaxy s10 တြင္ Shot အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အသုံးျပဳနည္း
ဆမ္ေဆာင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ အေမးေျဖမ်ား။ 'သင္၏ Galaxy s10 တြင္ Shot အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အသုံးျပဳနည္း' အေၾကာင္းအရာအား ပိုမိုသိရွိႏုိင္ရန္ ဆမ္ေဆာင္း အကူအညီႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ ရွာေဖြပါ။
Galaxy Apps Find My Mobile ကို မိမိ၏ Mobile device တြင္ အသံုးျပဳနည္း
How to Guide for Samsung Mobile Device. Find more about 'Setting up Find My Mobile' with Samsung Support.
ကင္မရာ Galaxy Z Fold3 5G ကင်မရာနှင့် ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံကို ခံစားကြည့်ပါ။
Samsung Mobile အတွက်အမေးအဖြေများ။ Samsung ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် တမူထူးခြားသော Galaxy Z Fold3 5G ၏ ခေါက်နိုင်သော ကင်မရာ အတွေ့အကြုံကို ခံစားကြည့်ပါ။
ကင္မရာ Galaxy S10 တြင္ ကင္မရာ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
ဆမ္ေဆာင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ အေမးေျဖမ်ား။ 'Galaxy S10 တြင္ ကင္မရာ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား' အေၾကာင္းအရာအား ပိုမိုသိရွိႏုိင္ရန္ ဆမ္ေဆာင္း အကူအညီႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ ရွာေဖြပါ။
သံုးစြဲပံု Galaxy ဖုန်းကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ။
သင့် Galaxy ဖုန်းကို သေချာသန့်ရှင်းနည်းနှင့် ထိန်းသိမ်းနည်း လမ်းညွှန်။
ကင္မရာ Scene Optimiser က ကၽြႏ္ုပ္၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဘယ္လို စီမံေပးသလဲ?
ဆမ္ေဆာင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ အေမးေျဖမ်ား။ 'Scene Optimiser က ကၽြႏ္ုပ္၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဘယ္လို စီမံေပးသလဲ?' အေၾကာင္းအရာအား ပိုမိုသိရွိႏုိင္ရန္ ဆမ္ေဆာင္း အကူအညီႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ ရွာေဖြပါ
ဘက္ထရီ သင့်ဧ။် Galaxy ဖုန်းတွင် Fast Charging ဖြင့်အားသွင်းခြင်း
Fast Charging ဖြင့်ဖုန်းအားသွင်းခြင်းပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်
အပ္ပလီေကးရွင္း အက်ပလီကေးရှင်း Error များကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
How to fix application keep crashing
ေသာ့ခတ္ျခင္း Lock screen ရှိကြော်ငြာများကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ။
how to remove Ads in Lock Screen
ကင္မရာ Galaxy S10 တြင္ AR အီမိုဂ်ီ အသုံးျပဳနည္း
ဆမ္ေဆာင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ အေမးေျဖမ်ား။ 'Galaxy S10 တြင္ AR အီမိုဂ်ီ အသုံးျပဳနည္း' အေၾကာင္းအရာအား ပိုမိုသိရွိႏုိင္ရန္ ဆမ္ေဆာင္း အကူအညီႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ ရွာေဖြပါ။
Galaxy Apps Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားအသုံးျပဳနည္း
ဆမ္ေဆာင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ အေမးေျဖမ်ား။ 'Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားအသုံးျပဳနည္း' အေၾကာင္းအရာအား ပိုမိုသိရွိႏုိင္ရန္ ဆမ္ေဆာင္း အကူအညီႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ ရွာေဖြပါ။
ေသာ့ခတ္ျခင္း Find My Mobile ကို အသုံးပြုနည်း
Find more about 'How do I use Find My Mobile?' with Samsung Support.
စက္တင္ ကေလးငယ္မ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ အေကာင္းဆံုး အေတြ႕အၾကံဳေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ဆမ္ေဆာင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ အေမးေျဖမ်ား။ 'ကေလးငယ္မ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ အေကာင္းဆံုး အေတြ႕အၾကံဳေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္း' အေၾကာင္းအရာအား ပိုမိုသိရွိႏုိင္ရန္ ဆမ္ေဆာင္း အကူအညီႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ ရွာေဖြပါ။
ေသာ့ခတ္ျခင္း Galaxy S10 တြင္ လက္ေဗြစကင္နာ အသုံးျပဳနည္း
ဆမ္ေဆာင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ အေမးေျဖမ်ား။ 'ဆမ္ေဆာင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ အေမးေျဖမ်ား။ 'TITLE' အေၾကာင္းအရာအား ပိုမိုသိရွိႏုိင္ရန္ ဆမ္ေဆာင္း အကူအညီႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ ရွာေဖြပါ။' အေၾကာင္းအရာအား ပိုမိုသိရွိႏုိင္ရန္
ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ အဆင့္ျမွင့္ျခင္း Android ဗားရွင္း ၉.၀ တြင္ အဓိကေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ဆမ္ေဆာင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ အေမးေျဖမ်ား။ 'Android ဗားရွင္း ၉.၀ တြင္ အဓိကေျပာင္းလဲမႈမ်ား' အေၾကာင္းအရာအား ပိုမိုသိရွိႏုိင္ရန္ ဆမ္ေဆာင္း အကူအညီႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ ရွာေဖြပါ။
ဘက္ထရီ Galaxy S10 ဖုန္းမ်ားအၾကား အဓိက ျခားနားခ်က္မ်ား
ဆမ္ေဆာင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ အေမးေျဖမ်ား။ 'Galaxy S10 ဖုန္းမ်ားအၾကား အဓိက ျခားနားခ်က္မ်ား' အေၾကာင္းအရာအား ပိုမိုသိရွိႏုိင္ရန္ ဆမ္ေဆာင္း အကူအညီႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ ရွာေဖြပါ။
စက္တင္ Meet the next level of lifetime story maker in Camera of Galaxy S21 Series
FAQ for Samsung Mobile. Find more about Meet the next level of Lifetime Story Maker in Camera of Galaxy S21 Series with Samsung Support.
Galaxy Apps SmartThings App တွင် ပါရှိသည့် Settings များအကြောင်း
FAQ for Samsung SmartThings. Find more about 'Settings in the SmartThings app' with Samsung Australia Support.
Galaxy Apps Find My Mobile ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
FAQ for Samsung Mobile Device. Find more about 'How to set up Find My Mobile' with Samsung Support.
တနင်္လာနေ့မှ တနင်္ဂနွေနေ့အထိ (အစိုးရရုံးပိတ်ရက်အပါ)
မနက် ၇ နာရီ မှ ည ၁၁ နာရီ အထိ ဝန်ဆောင်မှု
ဖုန်းခေါ်ဆို၍ Pre Booking လုပ်ခြင်းဖြင့် စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါပြီ။
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်၊ မုံရွာ၊ မော်လမြိုင်၊ ပြည် ၊ တောင်ကြီး နှင့် မြစ်ကြီးနားတို့ရှိ Samsung မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသူများအတွက် Samsung Call Center Hot Line (01 2399888) သို့ဖုန်းခေါ်ဆို၍ Pre Booking လုပ်ခြင်းဖြင့် စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုသည့် (No Need Q) ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါပြီ။
ကုန်ပစ္စည်း အကူအညီနှင့် ပံ့ပိုးရေး ကုန်ပစ္စည်း အကူအညီနှင့် ပံ့ပိုးရေး
Galaxy S10+ Galaxy S10+